» भारतका सरकारी कार्यालयहरु बाँदर आतङ्कले हैरान छन् !
भारतका सरकारी कार्यालयहरु बाँदर आतङ्कले हैरान छन् !
२९ भाद्र २०७६, आईतवार ०६:०३
पछिल्लो समय भारतको केन्द्रिय सरकारी कार्यालय बाँदर आतङ्कले हैरान भएको छ । प्रधानमन्त्री भवनदेखि सबै प्रमुख मन्त्रालयहरुमा बाँदरका सेनाले कब्जा जमाउन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरुलगायत सर्वसाधारणसमेत त्रासमा बस्नु परिरहेको बताइएको छ ।
यसरी बाँदरहरुले दिनहुँ खानेकुराहरु खोस्नेदेखि पावर लाइनहरु भाँच्ने र झ्यालबाट महत्वपूर्ण डक्युमेन्ट समेत खोसेर च्यात्ने अनि भाग्ने गरेको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका हुन् । वास्तवमा तिव्र शहरीकरणले नै बाँदरहरुलाई विस्थापित गराइरहेको हुँदा उनीहरु खानाका निम्ति मानव वस्तीमा पस्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
यस्तोमा भारतीय निकायले यस समस्याबाट राहत पाउनकै लागि बाँदरहरु डराउने लंगुरको प्रजातिको भेष बदल्ने मानिसलाई समेत राख्ने गरेको छ । तर जस्तोसुकै उपाय अपनाए पनि तिनीहरु केही समयमै फेरि फर्केर आउने गरेको पाइएको छ । वास्तवमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुले बाँदरलाई भगवान् हनुमानका रुप मान्ने हुनाले तिनलाई खुवाउने गरेका छन् । यस्तोमा बाँदरहरु मानिससँग डराउन छाड्ने हुँदा तिनलाई धपाउन झन कठिन बन्दै गएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी २००७ मा बाँदरको एउटा समूहले दिल्लीको मेयरलाई बार्दलीबाट धकेल्दा उनको मृत्यु भएको घटना पनि अझै धेरैले भुल्न सकेका छैनन् । यसरी २०१५ मा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको गंगा नदि किनारमा वाइफाइ जडान गर्ने योजना बाँदरहरुकै कारण विफल भएको थियो । यस्तोमा सरकारी निकायहरुले तिनलाई नजिस्काउन र सिधा आँखा नजुधाउन सबैसँग आग्रह गर्ने गरेको छ । –सिजिटिएन